(Q 21aad E Barnamijka Hogaan Iyo Horumar Hogaamiyha wanaagsan iyo Caafimaadka)
Sunday 6th October 2019 11:50:23 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Caafimaadku waa qaybta ugu muhimsan e nolosha sababto ah bulsho caafimaad qabta ayaa horumarta
waxbarata waxna qabsaTA isla markana la tartanta bulshoyin ka kale e aduun waynaha.
Caafimaadku waa isha nolosha waana qayb aad u muhiima Hadaba waynu wada aragnaa maanta sida u dalkenu yahay xaga caafimaadka mar marka qaar waxaad is odhonaysaa caafimaad darada gacmaheena ayaynu ka abuurana sababto ah meel walba qashin ayaynu ku daadina mana daryeelno deeganka isla markana waxba kama qabano.
Ka gudub ku sii tiigali mayno dhibatoyinkaas sababto ah waa wax iska muuqda o aynan is indhi tari karin waana in aynu si deg dega insha allah wax uga qabanaa waana wax ina horun o ina hor yaala.
Hadaba qaybta aynu sida fiican uga hadlaynaa waa in ay bulshadeenu caafimaad qabtaa qalbi ahaan o ka dheerata xanuunada xun xun e dadkena ka hortaagan horumarka sida qabyaalada nin jeclaysiga xasadka iyo deegamaysiga inaga dhigaya dad locol-ah.
Waa in aynu gacmaha isqabsanaa ka gudubnaa caqabadaha ina haysta si wada jira waa aana in aynu si dhaba u xalinaa caqabadaha ina haysta dawlada o qudha waxba xalin kari mayso waa in aynu la shaqeena haday ahaato culumada,aqoonyahanka,waxgaradka iyo guud ahaaanba dhalinyarada qof walbana waa in u halkiisa isku xilqaama su dalkani u horumari lahaa waana in u kalintiisana ka qaata horumarka.
Qofku marka u ka shaqeeyo danta guud ilaahay ayaa isna ka shaqeenaya arimihiisa gaarka ah isla markaana wax walba u fudaydinaya si fududna horumar wuu ku gaadhayaa idanka ilaahay.
Ugu danbayn aynu ka shaqeeno caafimaadka dalkeena iyo badqabka nafaheena waa in aynu noqono bulsho dhinac walba ka caafimaad qabta.